Isicwangciso sePoker Tournament - 15 Izimpumputhe ezinkulu kunye Ngezantsi
Ukuzilibazisa kunye Nemisebenzi Poker
Isicwangciso esincinci sePowers Poker Tournament - 15 Iimfama ezinkulu kunye nezantsi
Abadlali abaninzi baninzi xa i-stack yabo ifinyelela kwi-15 enkulu eyimfama kunye nezantsi. Inyaniso, kufuneka ukhululeke; kunye ne-stack le mfutshane, i-poker yaba lula ngokulula ukuyidlala. Esikhundleni sokuba ufumane imilinganiselo kunye nabadlali abafundayo, konke okufuneka ukwenzeyo kukugqiba ukuba uyayidonsa okanye ifake. Kulo nqanaba lomqhudelwano, ndinokukunika i-poker "inkqubo" njengoko ikhona.
11-15 Amafama amakhulu
Okokuqala kunye nalobukhulu bukhulu bukhulu ukuba ungaphakamisi uze uphinde uphewule, kodwa unzulu kakhulu ukubeka umngcipheko kwi-stack yakho yonke kwiimpahla ezimbi.
Gcina kwizandla zeprayim kwiindawo zokuqala - ukulahla i-AQ kunye ne-KQ ifanelwe phantsi kwesibhamu , kwaye uhlale kude namaqela amancinci. Ngethuba elide, unokuluvula ngokubanzi, kodwa ukuba akukho zixhobo, ungabi mfo. Ngoluhlobo olufanelekileyo lwabachasi, unokwenza umncinci ophakanyisiweyo okanye uhlambulule nge-Aces okanye kwiiKumkani ukuba usondele ngokuqinisekileyo ukuba uya kuphakanyiswa emva kwakho ukuze ungene konke xa isenzo sibuyela kuwe. Kodwa ukuba kukho nayiphi na into engathandabuzekiyo, ulungele ukucima nje ii-chips zakho phakathi kunye namaqela akho amakhulu.
Iibhulu eziPhumi kunye noPhantsi
I-Poker yinto elula ngoku ngoku. Ngalo mgca, ungadlala i-poker engaqondakaliyo. Ukusebenzisa i-Independent Chip Modeling kunye ne-Nash Equilibrium unokuyicombulula yonke imeko ngohlobo lwakho lwesitaki kunye nesandla ngokubhekisele kwizandla ezininzi ezingahleliwe zenzeke emva kwakho. Awazi ukuba yi-ICM ne-Nash Equilibrium? Umdlali wekhadi lobuchwephesha, uChris "Fox" Wallace kunye nam ngokwenza ukuphakamisa okunzima kuwe kwaye wabeka amashadi ethu kwi pushfoldcharts.com.
Yiya kwi-foldfoldcharts.com kwaye ufunde iitshathi-okanye uthenge omnye ukuba athathe nawe ekamelweni lekhadi. Bakunika lonke ulwazi oluyidingayo kumaphi amakhadi ukuba utyhoboze kunye nokuthi yimaphi amakhadi okuyophinda.
Nangona iitshathi zikunika izigaba ezingaqondakaliyo, kusekho utshintsho omele ulwenze, oludweliswe ngezantsi.
Umthetho oyimpumputhe oyisithandathu
Xa ufikelela ezintandathu eziyimfama, ziyakwazi ukuchaneka ukuphakamisa ngakumbi kunokuba iitshathi zibonisa. Oku kungenxa yokuba iminqweno eyisithupha eyimfama ihamba ngezantsi njengoko unako ukuhamba kwaye ulindele ukuba abantu baxhomeke ekukhuliseni kwakho. Xa uwela ngaphantsi kwelo nani, abantu baqala ukubiza ngokugqithiseleyo-ngokuqhelekileyo kunye namakhadi amabini-kwaye inzuzo enokubakho kubantu abayinyumbayo (eyona nto ibaluleke kakhulu kulezi zibalo ezincinci) ziyancipha.
Ngaphantsi kwamahlanu amakhulu
Uphantse ngokuqinisekileyo uya kubizwa xa uhamba yonke into ehamba phantsi kweemfama ezihlanu ezikhulu. Ngenxa yeengcambu zokungqinelana kunye neqiniso lokuba kukho abachasi abambalwa abaza kuhlutha udoti lwabo ngokungalunganga, kusalungile ukutshiza kunye ezininzi zezandla zakho apha. Kodwa ulwazi oya kubizwa ngalo luyakunokuchaphazela ukhetho lwakho. Ukuba unesitshixo esilungileyo (i-deuce-offuit offsuit) ivela kumqondo) kunye nabadlali abalandelayo kwimpumputhe banobuthakathaka kakhulu onokuyifumba kwaye nethemba lokufumana okokuqala kwisandla esilandelayo. Ukuba akukho zixhobo kwaye unokwazi ukukhangela kwizandla ezininzi ezongezelelweyo mahhala, unako ukuphinda. Kodwa ukuba kukho i-antes kwaye ungowokuqala, ukhetho lwakho olufanelekileyo kwizandla ezininzi kukunyuka kwaye uthandaze.
Esinye isizathu esihle sokudlala ngokukhawuleza ekuqaleni kwintlalontle kukuba xa ufika kumaxesha aphelileyo abantu baya kunika inhlonipho.
Njengokuba ngasentla, inzuzo evela kubantu abayifumbayo-ebizwa ngokuba yiFold Equity-iyona nto iphambili kwisicwangciso se-push / fold esiyimpumelelo. Ukuba unako ukuqinisekisile abachasi bakho ukuba ubeka zonke iichips zakho ebhodweni ngesandla somnatha, ukulingana kwakho kweefolda, kunye nobulungisa bakho bonke beentambo, uya phezulu.
Indlela yokudlala ekhadini elincinane
Basic Poker i xelela
Indlela yokudlala i-Texas Holdem Poker
Ukudlala njani iKhadi leKhadi leThathu
I-Best Best Texas Hold'em I-Poker Hands
Umfundi weKhadi eli-Seven-Low okanye i-Razz "I-Poker Rules
Isicwangciso esiPhambili sePack Poker Tournament - 100+ Big Blinds
I-Basics of Tournament Poker
Indlela yokudlala ezine iCards Poker
Ukwahlula izimbiza eTexas Hold'em
Nwabisa umdlalo omtsha-kwaye awunjalo iMidlalo yeNew-Poker yokuzama
IziNyango zokuKhuselwa kweMiyane kwiMakhaya
Umgca oPhezulu okanye oPhezulu weContour
Oko kuthetha ukuba 'yi-Senior Senior' kwiKholeji
Valoir le iqhosha - Ça vaut le coup
Imyuziyam yaseMelika yeMbali yeNdalo (eNew York, NY)
Imbali yokuKhanya kunye neLampu
Iingoma eziphezulu kunye neMigca yeeDolophini malunga neMbali yamandulo
Ukuqeqesha iZingxubusho eziPhakathi ezingama-300
IMyuziyam yoSayensi kunye neShishini e-Chicago
Usuku lwe-Valentine lokuprinta
Igama lomninimzi waseSpanishi: Iintsingiselo, iMvelaphi kunye nokuSebenzisa amagama
Indlela yokuguqula iNtshontsho kwiGold
Ukucacisa iThe Legend of Mary Bloody in Mirror
Amagama aSathana aMaKristu
Iincwadi eziphezulu malunga neLutheranism
UStefano eBhayibhileni-UmKristu wokuQala uMartyr
Ubusuku obungafihlakeleyo kwi-Gravity Hill
Urhulumente weeKoloni weeNqununu ezilishumi elinesithathu eziseKoloni
Iinqununu eziMnandi zeTalkcom
Ukukhanya Okumhlophe kuRay, Kukhokelwa ngu-Gabriel oyiNtloko
20 I-Facebook Iingxobo Zobani Abaphelele Kuwe-Uyazi-Yintoni